बिशेष खबर Archives - Saptakoshionline
इटहरी / संसद बिघटन पछि फुटको संघारमा पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र चर्किएको बिवादको असर सुनसरीको इटहरीमा पनि देखिन थालेको छ । २० वटा कमिटी रहेको इटहरीमा १८ वडा कमिटिका अध्यक्ष र सचिवहरूले संविधान बिपरित सांसद बिघटन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको बिरोध जनाएका छन । उनिहरूले ओलीलाइ प्रतिगमनकारी भन्दै प्रचण्ड र नेपालको पक्षमा रहेको घोषणा समेत गरेका छन । उनीहरूले पार्टी बिभाजनको बिरोध...
उच्च स्तरीय जर्मन टेक्नोलोजीले बनेको पूर्वकै ठुलो सिमेन्ट उद्योग बन्धन सिमेन्ट
इटहरी । बन्धन ब्रान्डको गुणस्तरीय सिमेन्ट पूर्वी नेपालको ठुलो सिमेन्ट उद्योग नेपाल अल्ट्राटेक सिमेन्ट प्रा लि.ले उत्पादन गर्दै आएको छ । बन्धन सिमेन्ट जर्मन टेक्नोलोजीले बनेको पूर्वी नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ग्राइन्डिङ युनिट क्षमता भएको सिमेन्ट उद्योग हो । जर्मन टेक्नोलोजीले बनेको उक्त युनिटले १६०० टनसम्म उत्पादनको क्षमता राख्ने कम्पनीका अध्यक्ष मनिष कुमार मारुले जानकारी दिए । ‘यो पूर्वी नेपालमै...
प्रदेश एकमा राजावादि आन्दोलन : कति सफल कति असफल ? कस्ले गर्दैछ नेतृत्व ?
इटहरी । मुलुकमा स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जनताको जिवनस्तर उकास्न नसकेको र देशलाइ टुक्राएर बिभाजन गरेको भन्दै बिभिन्न जिल्लाहरूमा अहिले राजसंस्थाको पक्षमा ‘राजा आउँ देश बचाउँ’ जस्ता नाराहरू लगाउदै सडकमा नाराजुलुस चलिरहेको छ । राजनीतिक बिवादले जनतामा छाएको निरासापनको फाइदा उठाउदै देशमा पुनःराजसंस्था स्थापना गर्ने उद्देस्यले हाल बिभिन्न जिल्लामा आन्दोलन शुरू भएको छ । काठमाण्डौबाट शुरू भएको आन्...
भुकम्प के हो ? कसरी बच्ने भुकम्पबाट, नेपालमा कहिले गए ठूला भुकम्पहरु ?
जमीनबाट ८० देखि एक सय किलोमिटर तलसम्मको पृथ्वीको माथिल्लो भाग धेरै टुक्रामा विभाजित छ। प्राविधिकहरू यी टुक्रालाई ुटेक्टोनिक प्लेटु भन्छन्। यस्ता प्लेटहरू समुद्रमा डुंगा तैरिरहेजस्तो एस्थेनोस्फेएर मा तैरिएर निश्चित दिशामा हिँडिरहेका छन्। यसरी हिँड्ने क्रममा यस्ता प्लेटहरू कहीँ एक अर्काबाट टाढा जान्छन् भने कहीँ नजीक आएर ठोक्किन्छन्। यसरी प्लेटहरू ठोकिँदा, एक प्लेट अर्कोका मुनि घुस्दा वा घोटिने क...
राहातकालागि गाउँ बिपद ब्यावस्थापन आपतकालिन बैठक
धनकुटा । साँगुरीगढी गाउँपालिकाका जाेखिम घरधुरिलाई राहातकालागि गाउँ बिपद ब्यावस्थापन आपतकालिन बैठक बिहिवार साँगुरीगढीमा सम्पन्न भएकाे छ । सम्पन्न बैठकले साँगुरिगढि गाउँपालिकामा पहिरो बाढि र बढि जाेखिम क्षेत्रका १० घर धुरी परिवारलाई स्थलगत रुपमा प्राविधिक अनुगमन गरि प्रतिबेदन तयार गरि तीन लाख रुपैयाँ को दरले क्षतिपुर्ती पाउने गरि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिएकाे गाउँपालिका अध्यक्ष कुमार जङ्ग याख्ख...
कोरोना संक्रमितको मनोबल बढाउन भन्दै कलालयले ल्यायो संन्देश मुलक भिडियो !
एक आपसमा नि:स्वार्थ साथ र सहयोग अनि मिठा भावनाहरू संगाल्दै अगाडि बढ्ने मानिसहरूको समूहलाई नै समाज भनिन्छ। सायद यसैका लागि समाजको निर्माण भयो। तर अहिलेको जोखिमपुर्ण स्थितिमा आपत विपतमा सहयोग गर्दै, एक आपसलाई प्रोत्साहन गर्दै अघि बढ्नुको साट्टो हाम्रो भाईचारा हराउदै गएको देखिन्छ। कुरा : कोरोना संक्रमण र संक्रमितलाई गर्ने व्यवहार बारे। अहिले समाजमा कोरोना संक्रमितको मनोबल बढाउदै प्रोत्...
तेजबहादुर बन इटहरी ।पूर्व पश्चिम राजमार्गसंगै जोडीएर हिडनुपर्दा सेवा सुविधाले भरिपुर्ण सानदार होटल तथा लजहरू थुप्रै भुटिन्छन ।तर पनि इटहरीको हकमा हेर्ने हो भने ति लजहरू भन्दा बेग्लै पहिचान बनाएर बसेको हिरा होटलको सान बेग्लै देखिन्छ । शुद्ध साहाकारी खाना तथा खाजा घरकालागि यो होटल नेपालभरी प्रशिद्ध छ । भारतबाट आएका पाहुनाहरूकालागि पनि यो होटल नामि छ । शुद्ध साहाकारी खाना , सरसफाइ अनी होटलमा ...
तेजबहादुर बन इटहरी । प्रदेश एकको बिभिन्न जिल्लाहरूमा वर्षा सुरू भएदेखि खोला , नाला , तथा कोशीमा आएको बाढीले हाल सम्म ५२ जनाको मृत्यु भएको छ भने १५जना बेपत्ता भएका छन । गएको २०७६ चैत्र २४ गते देखि प्रदेश एकको बिभिन्न जिल्लाहरूमा परेको अविरल वर्षाका कारण बाढी र पहिरोमा परी ५२ जनाले ज्यान गुमाएका हुन । सोहि अवधिमा १५ जना बेपत्ता बनेको प्रदेश एक प्रहरी कार्यालय बिराटनगरले जनाएको छ । प्रहरी कार...